स्थापित दृश्यहरु mods कुनै पनि FSX र P3D देखा
प्रश्न स्थापित दृश्यहरु mods कुनै पनि FSX र P3D देखा
2 वर्ष 1 महिना पहिले -2वर्ष 1 महिना पहिले #450 by StargateMax
यो कुनै एक अरू यस बारे अझै कुरा छ कि अचम्मको छ।
म एक वा दुवै FSX र Prepar3D लागि मानिन्छ, यो साइटबाट डाउनलोड धेरै दृश्यहरु एडअन स्थापित छ। को sceneries को कुनै पनि खेल (हरू) पाठका देखाउनका। यो हवाइजहाज एडअन राम्रो काम, तर म ती मा त चासो छैन।
म पनि यो हवाई दृश्यहरु, लगभग7जीबी र पेरिसमा पनि डाउनलोड। म खेल मा हेर्न सबै बस अघि जस्तै पूर्वनिर्धारित फोहर परिदृश्य हो।
के समस्या हुन सक्छ?
अन्तिम सम्पादन:2वर्ष 1 महिना पहिले StargateMax.
2 वर्ष 1 महिना पहिले #451 by Dariussssss
सबै को पहिलो, म यो नमस्कार भन्न भद्र छ लाग्छ।
दोस्रो, मलाई चेतावनी नगर्नुहोस्।
तेस्रो, थप जानकारी।
2 वर्ष 1 महिना पहिले #452 by StargateMax
1) नमस्कार (खेद)
2) यहाँ म भन्न छ:4तल पढ्नुहोस्।
4) ठीक छ, म गइसकेको छु, मलाई कुनै चिन्ता, हामी दुवै एकअर्कालाई अशिष्ट विचार जस्तै देखिन्छ।
2 वर्ष 1 महिना पहिले #453 by Gh0stRider203
StargateMax यस्तो लेखे:
म तपाईं को बोल्ने Hawai'i एक थाहा लाग्छ। यो स्थापना गर्न सक्छ, जबकि तपाईं स्वयं खेल थप्न हुनसक्छ। छैन एकदम निश्चित किन यो छ, तर कहिले काँही कि मामला हो।
तपाईं lemme कसरी गर्न को अनिश्चित हुनुहुन्छ भने थाहा र म संग फेरि मदत गर्न सक्छ
2 वर्ष 1 महिना पहिले -2वर्ष 1 महिना पहिले #454 by Dariussssss
गरेको यो जस्तै त्यसो गरौं ...
पहिलो, मलाई केही कुरा बताउन छ ...
तपाईंले सही यसलाई स्थापना गर्नुभयो?
तपाईं आफ्नो FSX मा दृश्यहरु सक्रिय गर्नुभयो?
जो दृश्यहरु पैक स्थापित गर्न खोज्नुभएको?
म यहाँ बाट डाउनलोड दृश्यहरु धेरै थियो, र तपाईं सही यसलाई भने यो सबै, काम गर्नुपर्छ।
अन्तिम सम्पादन:2वर्ष 1 महिना पहिले Dariussssss.
2 वर्ष 1 महिना पहिले #457 by StargateMax
का ताजा सुरु गरौँ, धेरै राम्रो तरिका महसुस। माथि बारेमा माफ गर्नुहोस्।
म ठूलो हवाई photoreal Vol 1-2-3 प्याक, पेरिसमा, माउण्ट स्थापित सगरमाथा, फिजी, बेलिएरिक द्वीप v2।
को स्थापनाकर्ताहरू तिनीहरूले स्वतः स्थापित हुनेछ भने र म तिनीहरू सीनरी पुस्तकालय देखाउनका हुनेछ कल्पित।
म सीनरी लाइब्रेरी (दुवै खेल) मा केही नयाँ देखे।
त्यसपछि म Addon सीनरी फोल्डर (दुवै खेल) मा देख्यो, र त्यहाँ म स्थापित गरेको थियो केही थियो। म पनि अलग स्थापित भयो कि लाग्यो, तर म स्वयं उनलाई थप गर्न तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन असमर्थ थियो।
यहाँ यो जवाफ लेखन गर्दा म अचानक एक चिम क्षण मिल्यो। म सीनरी (छैन "Addon") फोल्डरमा देख्यो र टाढा तल scrolled, र त्यहाँ तिनीहरूलाई फेला! र त्यहाँ काम गर्दछ देखि सीनरी पुस्तकालय थप्ने।
म यसलाई हल भयो लाग्छ। मेरो मनोवृत्ति सहिरहेको लागि धन्यवाद, म साँच्चै यो संग खिलवाड को2दिन पछि विरक्तलाग्दो थियो।
म यो पोस्ट नै समस्या मैले गरे सामना सक्छ जो कसैलाई मद्दत गर्छ आशा।
यहाहरु सबैलाई धन्यवाद!
2 वर्ष 1 महिना पहिले #464 by Dariussssss
त्यो राम्रो हो।
म किन थाहा happening.Don't एक नै कुरा थियो, तर स्थापनाकर्ताहरू नराम्ररी गलत केही कुराहरू गरिरहेका छन्। एक उचित अद्यावधिक साँच्चै आवश्यक छ।
यो काम गर्नुपर्छ भनेर हेर्न राम्रो। त्यसैले अब तपाईं केहि काम गरिरहेको छ जब अर्को पटक यो पायो।, हामीलाई सबै समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ, धेरै सकेसम्म हामीलाई भन्नुहोस्।
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.363 सेकेन्ड